ရှမီမာ ဘေဂမ်- လန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းကနေ ဆီးရီးယားကိုသွာ...
14 ก.พ. 2562 - 21:00 น.
ယူကေက ထွက်သွားတုန်းက ၁၅ နှစ် အရွယ်ပဲ ရှိသေးသူ
အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ IS အဖွဲ့ထဲ ဝင်ဖို့ ၂ဝ၁၅တုန်းက လန်ဒန် အရှေ့ပိုင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး ဆီးရီးယားထဲထိ သွားခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ဗြိတိသျှ ကျောင်းသူ ၃ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ သူ့အနေနဲ့ နောင်တရတာမျိုး မဖြစ်ပေမယ့် အခု အိမ်ပြန်လာချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တိုင်းမ်စ် မဂ္ဂဇင်း (the Times) နဲ့ အင်တာဗျူးထဲမှာ အခု အသက် ၁၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရှမီမာ ဘေဂမ်က အမှိုက်ပုံးတွေထဲ ထည့်ထားတဲ့ ခေါင်းပြတ်ကို မြင်ခဲ့ရပေမယ့် သူ့ အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေခဲ့ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူနဲ့အတူ ယူကေက ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဟာ ဗုံးကြဲခံရမှုတစ်ခုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ပြီလို့လည်း ရှမီမာ ဘေဂမ်က ပြောပါတယ်။ ကျန်တစ်ယောက် အခု သေသလား ရှင်သလား ဆိုတာတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပါဘူး။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်မယ် ဆိုပြီး ဆီးရီးယားထဲထိ သွားခဲ့သူ
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ရက်ကာမြို့ကို ရောက်တဲ့အခါ ရှမီမာ ဘေဂမ်ဟာ IS တိုက်ခိုက်ရေး သမားတွေရဲ့ ဇနီးမယားတွေ ဖြစ်လာဖို့ သူ့လိုပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားက လာကြတဲ့ တခြား အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တစ်အိမ်တည်း နေခဲ့ကြတယ်လို့ တိုင်းမ်စ် မဂ္ဂဇင်းကို သူက ပြောပါတယ်။
"အသက် ၂ဝ ကနေ ၂၅ နှစ်ကြား၊ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနိုင်တဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားနဲ့ လက်ထပ်လိုတယ် ဆိုပြီး ကျွန်မ လျှောက်ထားခဲ့တယ်" လို့ တိုင်းမ်စ်နဲ့ အင်တာဗျူးထဲမှာ ရှမီမာ ဘေဂမ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ IS တွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဆီးရီးယား အုပ်စုတစ်ခုထံ လက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ ဆိုပြီး၊ သူကတော့ အခု ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်း ဒုက္ခသည် စခန်း တစ်ခုထဲမှာ တခြား ဒုက္ခသည် သုံးသောင်းကိုးထောင်နဲ့အတူ ရှိနေပါတယ်။
IS အဖွဲ့ရဲ့ အဓိက မြို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရက်ကာမှာ နေတဲ့အချိန်တုန်းက ရှမီမာ ဘေဂမ် အနေနဲ့ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း တွေ့ခဲ့ရလား ဆိုပြီး တိုင်းမ်စ်မဂ္ဂဇင်း စာနယ်ဇင်းသမား အန်ထော်နီ လွိုက်က မေးတဲ့ အခါ မစ္စ ဘေဂမ်က "တွေ့ရပါတယ်။ ပုံမှန်ဘဝ အတိုင်းပါပဲ။ သူတို့ ဝါဒဖြန့် ဗီဒီယိုတွေထဲ ပြထားသလိုပဲ - ပုံမှန်ဘဝပါပဲ။" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
"စစ်မြေပြင်မှာ ဖမ်းမိတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းလေ … ၊ အစ္စလာမ့်ရဲ့ ရန်သူပေါ့" လို့ ရှမီမာ ဘေဂမ်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် "ဒီကိုလာခဲ့တာ နောက်တမရဘူး" လို့ ရှမီမာ ဘေဂမ်က ဆိုပါတယ်။
IS အဖွဲ့အပေါ် သေတဲ့အထိ သစ္စာခံမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားကို ရှမီမာ ဘေဂမ် ပြသခဲ့တုန်းက သူ့ အသက်အရွယ်ဟာ ဥပဒေအရ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးအရွယ် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အခုအချိန်ထိ သူသာ ၁၈ နှစ်အောက် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ ရှမီမာ ဘေဂမ်အရေး ဘယ်လို ပြုမူမလဲ ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါ ရှမီမာ ဘေဂမ်ရော၊ သူလွယ်ထားကလေးတို့ အတွက် အကျိုးအရှိစေနိုင်ဆုံး ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမယ့် တာဝန် ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၊ ရှမီမာ ဘေဂမ်ရဲ့ လက်ရှိ အသက်အရွယ်အရရော သူ ပြောခဲ့တာတွေ အရပါ သူဟာ သူလုပ်ခဲ့တာတွေ အပေါ် မှားယွင်းတယ်လို့ မယူဆတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ဦး ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ မစ္စ ဘေဂမ်အနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ သိမ်းသွင်းခံခဲ့ရသည် ဖြစ်စေ၊ ဆီးရီးယားထဲ လိင်ပိုင်း ကျူးလွန်စော်ကား ခံခဲ့ရသည် ဖြစ်စ သူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေ အတွက် သူ ပြန် တာဝန်ယူရမယ့် အနေအထားမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်သေပြီလို့ ပြောပြီး၊ တစ်ယောက်ကိုတော့ ပြန်တွေ့ထား၊ နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြမ္မာ မသိရ။
ဂျီဟာ့ဒ် တိုက်ခိုက်ရေးသမားရဲ့ ဇနီးမယား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ တာရီးနာ ရှပ်ကေးလ် ဆိုတဲ့ ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်ရင် အဲဒီ အမျိုးသမီးလည်း ကလေးငယ်နဲ့ အတူ စစ်ဇုံထဲကနေ ထွက်လာသူဖြစ်ပြီး၊ ဗြိတိန်ကို ပြန်လာတဲ့အခါ လုံခြုံရေးရဲ့ စစ်မေးချက်တွေကို လိမ်ညာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ တာရီးနာ ရှပ်ကေးလ်ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အဖြစ် ထောင်ချ ခဲ့ပါတယ်။
မစ္စဘေဂမ် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေထဲ IS အဖွဲ့တွင်း ဖိနှိပ်မှုတွေဟာ တုန်လှုပ်ဖွယ် အထိ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခါလီဖိတ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ သုံးနှုံးပြီး သူရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ IS အဖွဲ့ဟာ အခု ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်း မစ္စဘေဂမ် ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရှမီမာ အိမ်ကပျောက်သွားတုန်းက အစ်မဖြစ်သူ ရီနူးက ရှမီမာရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကိုင်ထားတဲ့ပုံ။
အရင်မွေးထားတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်လည်း မမျှော်လင့်ပဲ သေဆုံးခဲ့ရလို့ အင်မတန် တုန်လှုပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုပြီး မစ္စဘေဂမ်က ဆိုပါတယ်။
သားဖြစ်တဲ့ ဒုတိယကလေးအရင်ဆုံးသွားတာလို့ မစ္စဘေဂမ်က ပြောပြီး ကလေး ၃လသားအရွယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၈လက ဆုံးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ကလေးဖျားတဲ့အခါ အဟာရ မပြည့်ဝတဲ့ ပြဿနာက သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့စေတယ်လို့ တိုင်းမ်စ် မဂ္ဂဇင်းက ရေးပါတယ်။
သူဟာ အားနည်းနေတဲ့ အတွက် စစ်မြေပြင်မှာ တွေ့ကြုံရမယ့် ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်မှုတွေကို ခံနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါ့အပြင် မီးဖွားကာနီးလည်း ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူသာ ဆက်နေနေရင် မွေးလာမယ့် ကလေးလည်း တခြားကလေးတွေလို သေသွားနိုင်တယ်လို့ မစ္စဘေဂမ်က ဆိုပါတယ်။
ကလေးအတွက် အိမ်ပြန်ချင်တယ် ဆိုပေမယ့် နောင်တရကြောင်း မပြောသူ
ဒါပေမယ့် ဘယ် ဗြိတိန် နိုင်ငံသားမဆို ဆီးရီးယားကို ထွက်သွားခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေထဲ ပါဝင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ အားပေး ထောက်ခံခဲသည် ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်ကို ပြန်ဝင်လာမယ် ဆိုရင် စစ်ဆေး မေးမြန်း ခံရမယ်၊ စုံစမ်းခံရမယ်၊ တရားစွဲအပြစ်ပေးတာလည်း ခံလာရနိုင်ဖွယ် ရှိတယ် ဆိုပြီး ဝန်ကြီး ဝေါလေ့စ်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရှမီမာ ဘေဂမ်- လန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းကနေ ဆီးရီးယားကိုသွား IS အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့သူ